अब पेन्सन खुवाउनै कठिन ! यसरी बढ्दैछ भार - Deshko News Deshko News अब पेन्सन खुवाउनै कठिन ! यसरी बढ्दैछ भार - Deshko News
अब पेन्सन खुवाउनै कठिन ! यसरी बढ्दैछ भार
काठमााडौं, साउन १९
सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पाउने पेन्सनको भार राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै छ । ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब–भत्तामै खर्च भइरहेको अवस्थामा पेन्सनको भार पनि डरलाग्दो ढंगले बढ्दै छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
आर्थिक वर्ष ०६७-६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार आव ०७३-७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । यो रकम कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पेन्सनका लागि ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।